မဟာရာဇဝင်သစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မဟာရာဇဝင်သစ် သည် မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တောင်ငူခေတ် ရာဇဝင်ကျမ်းဖြစ်သော မဟာရာဇဝင်ကြီး ၏ တိကျမှုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် အသစ်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် စတင်ပြုစုခဲ့ပြီး ၁၇၉၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရေးသားသူ တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သူအနေဖြင့် ၁၇၈၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၇၉၃ ခုနှစ်အကြားတွင် တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်း စုဆောင်းတွေ့ရှိရသော ကျောက်စာပေါင်း ၆၀၀ ကျော်နှင့် ရှိနှင့်ပြီး မှတ်တမ်းများစွာတို့နှင့် စစ်ဆေးတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကျောက်စာမှတ်တမ်းများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုက်ဆိုင်ကာ ပြုစုထားသော ပထမဆုံး သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
မဟာရာဇဝင်သစ်ကျမ်းတွင် ၁၇၈၅ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်ရပ်များ ပါဝင်ပြီး ယခင် ရာဇဝင်ကျမ်းများ၏ မှားယွင်းမှုများကို ပြင်ဆင်ထားခြင်းများနှင့် ယခင်ကျမ်းများအား ဝေဖန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း ယခင်ရာဇဝင်ကျမ်းများအား ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ထားမှုများကြောင့် ဘုရင်နှင့် နန်းတော်လွှတ်ရုံးတို့မှ လက်မခံခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် အပယ်ခံ ရာဇဝင် ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြု ရာဇဝင်ကျမ်းဖြစ်သော မှန်နန်း ရာဇဝင် သည် ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ယင်းရာဇဝင်ကျမ်းတွင် မဟာရာဇဝင်သစ်ကျမ်း၏ ပြင်ဆင်ချက်များ၊ အထူးသဖြင့် ပုဂံခေတ်ဘုရင်များ၏ နန်းသက်ရက်စွဲများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
မဟာရာဇဝင်သစ်ကျမ်းသည် ယနေ့အချိန်ထိ လူသိနည်းသော ကျမ်းတစ်စောင် ဖြစ်သည်။
↑ သော်ကောင်း၊ ၂၀၁၀၊ စာ ၄၄–၄၉
↑ သော်ကောင်း၊ ၂၀၁၀၊ စာ ၅၀–၅၁
↑ Hsan Tun in preface of (Hmannan Yazawin 2003: xxxv)
↑ မဟာရာဇဝင်၊ အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၆၊ စာ ၃၄၆–၃၄၉
↑ သော်ကောင်း၊ ၂၀၁၀၊ စာ ၄၄
Charney၊ Michael W. (2006)။ Powerful Learning: Buddhist Literati and the Throne in Burma's Last Dynasty, 1752–1885။ Ann Arbor: University of Michigan။
Hall၊ D.G.E. (1961)။ Historians of South East Asia။ London: Oxford University Press။
ကုလား၊ ဦး (၁၇၂၀)။ မဟာရာဇဝင်ကြီး။ ၁–၃ (၂၀၀၆၊ စတုတ္ထအကြိမ် ed.)။ ရန်ကုန်: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။
သော်ကောင်း၊ ဦး (၂၀၁၀)။ Aspects of Myanmar History and Culture။ ရန်ကုန်: ကံ့ကော်မြိုင်။
Woolf၊ Daniel (2011)။ A Global History of History (reissue, illustrated ed.)။ Cambridge, UK: Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-69908-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာရာဇဝင်သစ်&oldid=710505" မှ ရယူရန်
၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။